BACELA USIZO NGONYAMALELE - Ilanga News
Home Izindaba BACELA USIZO NGONYAMALELE
BACELA USIZO NGONYAMALELE
UPHITHENE amakhanda umndeni waKwaBhengu eMlazi, kulandela ukunyamalala kwelungu lawo osekuyophela isonto lingaziwa. Umndeni kaMnu Mmeli Bhengu 25 (osesithombeni), uthi ugcine ukumbona ngoLwesine olwedlule elandwe yimoto abangayazi eyothungela umshado, kumanje ucingo lwakhe luvaliwe.UMnu Bhengu unyamalala nje, wayetshele udadewabo omdala ukuthi uzoya oThongathi, uyothungela umuntu abangamazi ingubo yomshado obuzoba ngempelasonto. UNkz Minenhle Bhengu ongudadewabo kaMmeli uthi sebebheke yonke indawo, kuhlanganisa izibhedlela nasemakhazeni kodwa babuya belambatha.
“Umfowethu ungumuntu osebenza ngokuthunga ngaphansi kweNdoni Fashion House, kwesinye isikhathi ubeke athole imisebenzi eceleni uma esephumile emsebenzini. NgoLwesine ungitshele ukuthi kunomsebenzi awuthole komunye umuntu oThongathi kanti kumele ayomthungela ingubo yomshado. “Uthe loyo mshado uzoba ngempelasonto lena esiphuma kuyona. Kuthe ntambama ebuya emsebenzini ngoLwesine, wahlala emnyango ngoba bekushisa, wabe esetshela izingane zasekhaya ukuthi kunemoto ezomlanda, khona lapho esaphuthuma khona, uyabuya.
“Akasitshelanga ukuthi imoto ezomlanda ngekabani nokuthi uzobuya nini. Kube sekuqhamuka imoto, wangena kuyona. Umalume esezama ukumshayela ucingo bese luvaliwe. Sihlalile samlinda sizitshela ukuthi uyabuya. “Kuthe uma kushaya iSonto engabuyi, engatholakali nasocingweni, sabona ukuthi kukhona okungahambi kahle. Sivukele emaphoyiseni ngoMsombuluko sayovula icala. Besicela kunoma ngubani owaziyo ukuthi ukuphi axhumane namaphoyisa noma nomndeni,” esho. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Col Nqobile Gwala, uthi likhona idokodo elivuliwe ngalolu daba. Ongaba nolwazi kucelwa afonele uConst NP Cele ku: 031 325 6256.
Previous articleIBUYISE ITHEMBA EYESIMEMEZELO SOKUSETSHENZISWA KWAMAPAYIPI ATHENGWA NGO-2012
Next articleUthishanhloko uboshwe elaliswe esibhedlela sabagula ngengqondo